जनवरी 21, 2017 जनवरी 21, 2017 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments चाणक्य, चाणक्य नीति, जीवन
चाणक्यका ६ नीतिहरु ध्यानमा राख्दा जीवनमा नोक्सान कहिल्यै हुँदैन ! चाणक्य प्राचीन समयका एक महान दार्शनिक तथा सम्राट चन्द्रगुप्तका सल्लाहकार थिए। उनले अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदिका महान ग्रन्थहरू रचना गरेका थिए। उनले जीवनमा जो अनुभव प्राप्त गरे, जुन नियम बनाए ती आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । उनी कुटिल रणनीतिकार समेत थिए । उनले आफ्नो कुटनीतिको बलले एक सामान्य बालक चन्द्रगुप्तलाई विशाल भारतको सम्राट बनाइदिए । उनका भनाईहरु आजपनि सर्वत्र चर्चा हुने गर्दछ ।
उनका यी ६ नीतिहरुलाई लागु गर्ने हो भने मानिस जस्तासुकै नोक्सानबाट बच्न् सक्छ।
१. मित्र र शत्रुको पहिचान
मानिसले आफ्ना मित्र र शत्रु चिन्न सक्नुपर्छ। हामीले सच्चा मित्र र शत्रु चिन्यौ भने हानीबाट बच्न सकिन्छ । जीवनमा मित्रका भेषमा शत्रु पनि आउँछन्। यिनीहरुबाट बच्नुपर्छ। शुत्रलाइ चिनेर उनीहरुबाट सधै बच्नुमा भलाई हुन्छ ।
२. समयको पहिचान
जोसुकै समझदार मानिसले जान्दछ हाल कस्तो समय चलिरहेको छ। सुख दिन छन कि दुःखमा जिन्दगी चलिरहेको छ ? यसकै आधारमा काम गर्नुपर्छ। दुःखका बेला धैर्यता नगुमाउनु र समझदारीका साथ अगाडी बढ्नु र सुखमा बेलामा लापरवाही गर्नुहुँदैन् ।
३. स्थानको पहिचान
मानिसलाई आफू बसेको स्थानका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । त्यहाँको वातावरण र परिस्थितिले धेरै कुरा तय गर्छन्। यदि खराव मानिस बस्दछन् भने सावधान रहनुपर्छ भने वातावरण स्वास्थ अनकुल छैन् भने त्यसबाट बच्न पहिलै प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
४. आफ्नै पहिचान
मानिसलाई आफ्नो योग्यता र कुशलताको पहिचान हुनुपर्छ। योग्यताले नभ्याउने काम गर्नुहुन्न ।
आफूलाई सुहाउने र क्षमता पुग्ने कार्य गर्दा सफलता हासिल हुन्छ ।
५. गुरु वा स्वामीको चाहनाको पहिचान
मानिसलाई आफ्नो गुरु वा स्वामीको चाहनाको पहिचान हुनुपर्छ। उनी जे काम गराउन चाहन्छन् त्यही गर्नु पर्छ। यसो गर्दा केही अफ्ट्यारोको सामना त गर्नुपर्ला र यही सहि नीति हो ।
६. आय र व्ययको पहिचान
मानिसलाइ आफ्नो आय-व्यय अर्थात कमाइ-खर्चको जानकारी हुनुपर्छ । आफ्नै कमाई अनुसार खर्च गर्ने हो । आफ्नो आर्थिक तागत बमोजित योजना गर्नुपर्छ।
← जाडो मौसममा खाने खानेकुराहरु
चाणक्यका ५ नीतिलाई शिरोधार्य गर्दा तपाईंको सधैं जीत →
जनवरी 25, 2017 जनवरी 25, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0